काठमाडौंमा निषेधाज्ञा एक साता थप्ने तयारी, थप क्षेत्र खुलाउनेबारे हेर्नुस के के भनिएको छ | Khabar Sadan खबर सदन
Home अर्थ काठमाडौंमा निषेधाज्ञा एक साता थप्ने तयारी, थप क्षेत्र खुलाउनेबारे हेर्नुस के के...
कोभिड-१९ संक्रमणको जोखिम कम गर्न काठमाडौं उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एकसाता थप्ने तयारी भएको छ । आइतबार बेलुका बस्ने काठमाडौं उपत्यकाका तीनै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयुक्त बैठकले निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गर्ने भएको छ ।
अहिले जारी निषेधाज्ञा सोमबार मध्यरातसम्म कायमै छ । नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका तीनै सीडीओहरुले एकसाता निषेधाज्ञा थप गर्ने कुरामा मतैक्य भएपनि थप क्षेत्रलाई खुलाउने बारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावका आधारमा निर्णय गरिने बताए ।
‘निषेधाज्ञा एकसाता थपिनेछ तर, सार्वजनिक यातायात खुलाउने भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त सुझावमाथि छलफल हुनेछ अनि एउटा निष्कर्षमा पुग्छौं’ भक्तपुर सीडीओ प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने, ‘अहिलेको स्थितीमा सार्वजनिक यातायात खुलाइहाल्ने योजना छैन ।’
काठमाडौंका प्रजिअ कालिप्रसाद पराजुली र ललितपुर प्रजिअ ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि सार्वजनिक यातायात खुलाउने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावमा निर्भर हुने बताए । थप क्षेत्र खुलाउनेबारे तीनैजना सीडीओहरु अलमलमा छन् ।
२५ सिटभन्दा माथिको सार्वजनिक यातायातमा जोर-विजोरसहित अहिले पसलहरुलाई निश्चित समय खुल्न दिएर निषेधाज्ञा खुकुलो तुल्याइएको छ । निषेधाज्ञा लागु भैरहेपनि संक्रमण दरमा उल्लेखनीय गिरावट आएको छैन । संक्रमण दर स्थिर हुँदा यसले निषेधाज्ञा खुकुलो तुल्याउन थप चुनौति सिर्जना गरिरहेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझाव के छ ?
यतिबेला सीसीएमसी र डीसीसीएमसीको ध्यान स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ सोझिएको छ । अहिले जारी निषेधाज्ञा र प्रतिबन्धहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे यी दुबै संयन्त्र स्वास्थ्य मन्त्रालयको सुझावको प्रतीक्षामा छन् ।
एकातर्फ यातायात व्यवसायी र अर्कोतर्फ स्वास्थ्य मन्त्रालयको दबाबको कारण यी दुबै संयन्त्रले निषेधाज्ञाबारे स्वतन्त्र निर्णय गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा निषेधाज्ञा थप्ने काम मात्र भैरहेको छ ।
शनिबार नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद पौडेलले संक्रमण नघटेको कारण जोखिम कायमै रहेकाले सोहीअनुसार निर्णय हुने बताए । उनका अनुसार संक्रमण घटेका जिल्लामा सार्वजनिक यातायात खुलाउन अनुमति दिन सकिन्छ भने काठमाडौं उपत्यकामा तत्काल थप क्षेत्र खुलाउन अनुमति दिइनु जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।
‘केस खासै घटेको छैन । जोखिम कायमै छ’ पौडेलले भने, ‘हामीले परिस्थिती अनुसारको सुझाव दिन्छौं । अहिले नै यस्तो भन्ने छैन । परिस्थिती हेरेर निर्णय लिने हो ।’ संक्रमण दर १० प्रतिशतमा घटेमा मात्र थप क्षेत्रहरु चरणबद्ध रुपमा खुलाउन अनुमति दिइने प्रवक्ता पौडेलको भनाई छ ।
सीसीएमसीले भन्यो : संक्रमण हेरेर लामो दूरीको यातायातबारे निर्णय गर्छौं
कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र निर्देशक समिति (सीसीएमसी)सँग यातायात व्यवसायीहरुले २२ गतेदेखि लामो दूरीको यातायात खुलाउन माग गरेका छन् । बिहीबार सीसीएमसीका पदाधिकारीसँग भेट गर्दै उनीहरुले लामो दूरीको यातायातलाई तत्काल खुलाइनुपर्ने बताए । खुला नगरिए एकतर्फीरुपमा यातायात चलाउने पनि उनीहरुले बताएका छन् ।
सीसीएमसी प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले संक्रमण दर हेरेर मात्र लामो दूरीको यातायात खुलाउन अनुमति दिइने बताए । ‘कुन क्षेत्रमा कति संक्रमित छन् र संक्रमण दर कति छ भन्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको ब्रिफिङको आधारमा अघि बढ्न हामीले डीसीसीएमसीहरुलाई सुझाव दिएका छौं’ प्रवक्ता पुष्करले नेपाल प्रेसलाई भने ।
आदेश नमान्नेविरुद्ध कानूनी कार्वाही हुन्छ : सीडीओ
काठमाडौं र मुलुकको अवस्था कस्तो छ ?
शनिबार काठमाडौं उपत्यकामा ३७६ जना संक्रमित थपिएका छन् । जसमध्ये काठमाडौं जिल्लामा २४६, ललितपुरमा ८१ र भक्तपुरमा ४९ जना संक्रमित थपिएका छन् । संक्रमण संख्या घटेको देखिएपनि संक्रमण दर भने घटेको छैन बरु स्थिर छ ।
२६ जिल्लामा अझै पनि सक्रिय संक्रमित संख्या २०० भन्दा माथि छ । काठमाडौंको सक्रिय संक्रमित संख्या ५०५१, भक्तपुरको १२१० र ललितपुरमा १६९४ रहेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकमा २३२८ जना कोभिड बिरामी थपिएका छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार १० हजार १३३ (५८३७ पीसीआर र ४२९६ एन्टीजेन) नमुना परीक्षण गर्दा ती संक्रमित थपिएका हुन् ।
शनिबार थप १९ जनाको मृत्यु भएको छ । ३०६६ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । सुनसरीमा १५१, मोरङमा १३५, कास्कीमा १४६ संक्रमित थपिएका छन् । सक्रिय संक्रमित ५०० भन्दा बढी हुने जिल्लाको संख्या घटेर ११ मा सीमित भएको।
Previous articleशेयर बजारको क्रेज ह्वात्तै बढ्यो र १४ अर्ब ३४ करोडको आइपिओका लागि अनुमति
Next articleसोमबार साँझसम्म हस्ताक्षर फिर्ता नभए एमाले एकता नहुने ओलीको घोषणा छ